‘तँ’ भित्र ‘म’ को विचरण::KhojOnline.com
केही वर्षअघिदेखि अक्षरको व्यापार अँगालेर अघि बढिरहेका कलमकर्मीको नाम हो – दामोदर ढकाल ‘दीपक’ । ‘दीपक’ को काम प्रकाश छर्नु हो । अन्धकारको नास गरी उज्यालो प्रदान गर्नु हो । अक्षरका माध्यमबाट त्यही कर्ममा लागेका छन् दामोदर ढकाल ‘दीपक’ । काम अनुसारको उपनाम ठिक जँचेको छ । ‘म साहित्यकार होइन तर साहित्यलाई पे्रम गर्ने मान्छे हुँ’ भन्ने दीपकजी साँच्चै व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छन् । नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा वि. सं. २०३५ सालमा जन्मेका उनी परिश्रमका पर्याय हुन् ।
आजभन्दा ठिक एक वर्षअघि अर्थात् वि. सं. २०७५ साल कार्तिकमा प्रकाशनमा आएको उनीद्वारा लिखित कृतिको नाम हो – ‘तँ’ । विधागत हिसाबमा उपन्यास । उपन्यास पनि लघु । मात्र पैँसठ्ठी पृष्ठमा संरचित । यसै वर्षको भदौतिर उपहारका रूपमा प्राप्त भएको थियो मलाई यो कृति । हात थापेको दुई साढेदुई महिना जतिपछि अक्षरशः पढ्न भ्याएँ । पढ्दै गर्दा बिचमा रोकिनु परेन । लघुबङ्कासम्म नगरी एउटै लघुबसाइमा सकियो । स्वादिष्ट लाग्यो । पूरै पढिसक्दा पेट अघायो जिभ्रो अघाएन भनेभैmँ भयो । अभैm पढ्छु भन्दाभन्दै अक्षरले बिदा लिए ।
दामोदर ढकाल ‘दीपक’ को अक्षरलाई कागजमा टाँस्ने एउटा अक्षर कारखाना छ । उनले यसको नाम ‘गौरी पब्लिक रिलेसन एन पब्लिकेशन’ जुराएका छन् । उनी यसै अक्षर प्रकाशन कारखानाका अध्यक्ष हुन् । यसमा आफ्नो कृति त छाप्छन नै्, अरूको पनि छोड्दैनन् । छापिदिन्छन् । ‘बाल’ देखि ‘वयस्क’ सम्मका लागि यपयोगी पुस्तक छापेर आफ्नै अगुवाईमा अक्षरको बजारमा लगेर छर्छन् । पढ्नेले रुचाउँछन्, नपढ्नेले कुरा काट्छन् । साहित्यबस्तीको समाज यस्तै छ ।
‘तँ’ भित्र पुस्तागत लडाईं छ । पात्रगत हिसाबले केलाउँदा यस्तो अनुभूत हुन्छ । पात्रहरू कोही शोषण र पुरातनवादी विचारका बाहक छन्, कोही स्वच्छ मनले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका नवआधुनिक विचारका प्रवर्तक छन् । राम्रैसँग दुवैको द्वन्द्व चल्छ यसभित्र । कुराका चिप्ला व्यवहारका कडा छन् – शोषण र पुरातनवादी विचारका नायक घरबेटीका रूपमा उपस्थित गराइएका पात्र राम । उनी समाजभित्रका शोषक, दमनकर्ता, व्यभिचारी, घुस्याहा, छट्टू आदि पात्रको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित गराइएका छन् । पूर्व पेशाले पूर्व सिडिओ हुन् उनी । समाजको भाषामा पेन्सनधारी । जागिरपछि कवाडी व्यवसायी । उनी उपन्यासको मुख्य पात्रमध्येका एक भएर पनि कुपात्रका प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
समाजमा स्वच्छ मनले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका नवआधुनिक विचारको प्रवर्तन गर्न खोज्ने पात्रका रूपमा ‘म’ भएर उपन्यासकार आपैmँ उपस्थित भएका छन् । तर, उपन्यासको अन्त्यतिर पुगेपछि यो ‘म’ पात्र उपन्यासकार होइन रहेछ भन्ने खुलस्त पारिन्छ ।
उपन्यासको औपन्यासिक कथानक सानो छ । मुख्यपात्रको रूपमा रामको नामबाट अगाडि सारिएका घरबेटी छन् यहाँ । समाजलाई नपच्ने कुकृत्यका नायक हुन् उनी । नाम नलेखीकन नक्कली डाक्टरको रूपमा उपस्थित छन् घरबेटीका छोरा, जो पुलिस अफिसमै डाक्टर छन् । रामको घरमा काम गर्ने केही केटी, डेरावाल, पहिलोको मृत्यु पश्चात् ल्याइएकी राम आपैmँकी दोस्री श्रीमती, कवाडीवाल, पुराण आदिमा वर्णित नारद र महाभारतमा वर्णित शकुनीको भूमिका बिर्साउने नारी पात्र दमन्ता आदि पात्रहरू यसभित्र सजिलै अटाएका छन् ।
मुख्य पात्र रामसँग सम्पर्क हुन्छ ‘म’ पात्रको । उनकै घर भाडामा लिन पुग्छन् । अनेक किसिमका कचिङ्गल आइलाग्छन् । अनेकका अनेकथरी कुरा सुनेर ‘म’ पात्रलाईु हुनसम्म दुःख दिने नियत राख्छन् । रामको न घरभित्रको व्यवहार ठिक छ न बाहिरको । आफ्नै श्रीमती पनि उपत्यका बाहिर बस्छिन् । कारण, केटी देखेपछि कृष्ण बन्न चाहने उनको आनीबानी हो भन्ने अनुमान लगाउँछन् उनलाई चिन्नेहरू । ‘म’ पात्रलाई अप्ठ्यारो पारेर पैसा मागिन्छ । कोठा छोड्न भनिन्छ । उनी समय माग्छन् । ऊ मान्दैन । तानन्तार ताकेता भइरहन्छ विभिन्न माध्यमबाट । मज्जैले धम्क्याइन्छ । फेरि कोठा छोड्न खोज्दा थप एक महिनाको भाडा बढी खाएर मात्र कोठा छोड्न दिइन्छ ।
पूर्व सिडिओ अर्थात् घरबेटी राम मर्छन् । उनको मृत्युसँगै समाजको सामन्ती, शोषक, व्यक्तिचारी, घुस्याहा, छुल्याइँकर्ता आदि सबैको मृत्यु हुन्छ । घरबेटीको यो मृत्यु प्रतिकात्मक छ । उनको मृत्युमा रुने उनकै घरमा डेरा गरी बस्ने र देखिने रूपमा घरबेटीकै लुगा धुने, भाँडा माझ्ने, बढारकुढार गर्ने एउटी को को युवती महिला पात्र मात्र हुन्छिन् । अरू रुँदैनन् । कत्ति पनि विस्मात गर्दैनन् । यसले उनीहरू बीचको विशेष सम्बन्धलाई पनि सङ्केत गर्छ ।
रामको मृत्युपछि बाहिर बसेकी श्रीमती घर आउँछिन् । घर सुचारु हुन्छ । मृत्यु संस्कारभित्रका विभिन्न काममा ‘म’ पात्र उपस्थित हुन्छ । कत्ति पनि कृतघ्नता देखाउँदैन । परिवारका सदस्यहरू ‘म’ पात्रलाई रामको विगतका कुराहरू खोतलेर गुनासो गर्छन् ।
‘तँ’ शब्द नामधारी उपन्यास शाब्दिक हिसाबले जति अशिष्ट छ, औपन्यासिक कथागत हिसाबले त्यत्ति नै शिष्ट छ । सरल छ । यतिभन्दा बढी अहिले नबोलौँ । किनकि, बढी बोल्दा उपन्यासभन्दा लामो समीक्षा भयो भने समीक्षकको के हबिगत होला ! त्यसैले यत्तिकैमा कलम बिसाउने अनुमति चाहन्छु । सबैको जय होस् । ***
मङ्ल, पुस १५, २०७६ मा प्रकाशित
साहित्यका बहुविधामा कलम चलाउन खप्पिस रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठका तीन कृतिहरु
बहुआयमिक प्रतिभाका धनी, साहित्यका बहुविधामा कलम चलाउन खप्पिस रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठका चम्ल्याहा कीर्ति सन्तान मध्ये मेरो हातमा ‘टाटु’ ‘कथा कसरी लेख्ने’ र ‘नेपालको पहिलो भू–उपग्रह’ आइसकेका छन् । अर्को बहुप्रजातिका चराहरूको चित्र सहित विवरण प्रस्तुत गरिएको एक पुस्तक कम्प्युटर गर्दैको स्थितिमा मैले देखें । उहाँको...